मनोज गजुरेल, श्रावण २६, २०७५
आउनुहोस्, हिमालको चिसो हावा खाँदै माउन्टेनेरिङ पढ्नुहोस् । पहाडको न्यानो बताससँगै कृषि पढ्नुहोस् । तराईको तातो माया लिँदै उद्योग पढ्नुहोस् । जति नै पढे पनि खानेकुरा त्यही हो । जति नै बढे पनि बस्ने धर्ती यही हो । स्वदेशमा बढेको मान्छेले स्वदेशमा पढेको सुहाउँछ । कुनै सम्भावना नभए पो एब्रोड स्टडिजको पछि लाग्नु सम्भावनाको महासागर छोडेर कहाँ विदेशको भवसागरतिर दौडिरहनु भएको छ ? पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , श्रावण २६, २०७५
चलचित्र ‘कथा काठमाण्डौं’मा समावेश दोस्रो गीत सार्वजनिक भएको छ । असोज १२ गतेबाट अल नेपाल रिलिजको प्रचारमा रहेको चलचित्र यूनिटले केहि दिन अघि मात्रै पहिलो गीत सार्वजनिक गरेको थियो । सार्वजनिक गीतमा चलचित्रका ३ जोडी कलाकारलाई प्रस्तुत गरिएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
हालै बेलायतको पश्चिमी ससेक्समा आयोजित गुडवुड फेस्टिभल अफ स्पिड–२०१८ मा उक्त कारको प्रदर्शन गरिएको थियो । पगानी जोन्डाको एचपी बार्सेटामा ७ दशमलव ३ लिटरको इन्जिन छ, जसमा ६–स्पिड गियरबक्स जडान गरिएको छ जसले ७८९ बीएचपी पावर दिन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
एजेन्सी, श्रावण २६, २०७५
बलिउडको लाइफस्टाइल लोभलाग्दो छ । क्यामेराबाहिर बलिउड स्टारहरू आफ्नो मुड फ्रेस गर्न अनेकन उपाय अपनाउँछन् । उनीहरू साथीभाइहरूको बर्थ डे, विवाहको रिसेप्सन पार्टी वा अन्य कुनै पनि सभा–समारोहमा परिवार, श्रीमान्–श्रीमती, प्रेमी वा प्रेमिकासहित सहभागी हुनुलाईसामान्य मानिन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
नेपालमा सर्वाधिक रुचाइएको जुस आँपको जुस हो । यो लगभग सबै ब्रान्डमा उपलब्ध छ । नेपालमा भित्रिने अधिकांश आँपको जुस भारत तथा बंगलादेशबाट आउँछन् । नेपालको बजारमा आँपपछि क्रमश: सुन्तला, भुँइकटहर, स्याउ, अनार, अम्बा, मिश्रित तथा अंगुरका जुस लोकप्रिय छन् । त्यसबाहेक नेपालमा क्रेनबेरी, किवि, एभोकाडो, वाटरमेलोन जस्ता जुस पनि उपलब्ध छन् । यी जुस बढीजसो बिरामीले प्रयोग गर्छन् । पुरा पढ्नुहोस्
साउनको तेस्रो साता प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘कहीँ कतै’ मार्फत उमाकी छोरी शिवानी गिरीले ठूलो पर्दामा पदार्पण गरेकी छिन् । यो रोमान्टिक चलचित्रमा उमाले छोरी शिवानीको जोडी नयाँ अनुहार सोनम बरफुङ्गपासँग बाँधी दिएकी छिन् । पुरा पढ्नुहोस्
डा. राजेन्द्र भद्रा, श्रावण २६, २०७५
प्राय: सबैजसो पुरुषले आफ्नो जीवनको कुनै समयमा वीर्य स्खलन छिटो भएको अनुभव गरेका हुन्छन् । योनिमा घर्षण नै गर्न नपाई वीर्य स्खलन हुने समस्या पुरुषहरूमा देखिने यौनसम्बन्धी समस्यामध्ये सबैभन्दा बढी पाइने समस्या हो । पुरा पढ्नुहोस्
वास्तविक कथाले मानिसको मन छुँदो रहेछ (अन्तरवार्ता : आफ्नै जीवनलाई दोहोर्‍याउँदा धेरै पटक भक्कानियौं) । यसको ज्वलन्त उदाहरण बोबी चलचित्रले देखाएको छ । उमेश थापा र कविता गुरुङको जोडी उदाहरणीय छ । उनीहरूको संघर्ष प्रशंसनीय छ । हिम्मत हारेकाहरूका लागि यो जोडीले आत्मबल थपेको छ । पुरा पढ्नुहोस्